ဂင်္ဂါမြစ်အတွင်း တွေ့ရတဲ့ ရုပ်အလောင်းအချို့။ (မေ ၁၁၊ ၂၀၂၁)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ Uttar Pradesh ပြည်နယ်တွင်းက ဂင်္ဂါမြစ်အတွင်းမှာ စနေနေ့က သေဆုံးသူ ရုပ်အလောင်းတွေ ထပ်ပြီး တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်း သေဆုံးသူ ရုပ်အလောင်း ၁၀၀ ကျော် မျောပါလာတဲ့ နေရာမှာပဲ အခုရုပ်အလောင်းတွေ ထပ်တွေ့ရတာကြောင့် Ghazipur ခရိုင် Gahmar ရွာက လူတွေ ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့နေကြပါတယ်။ တခြားဒေသတွေကနေ မျောပါလာတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရွာခံ Akhand Pratap က ပြောပါတယ်။
“တခြားခရိုင်တွေကနေ မျောလာတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂင်္ဂါမြစ်က Ghamar ရွာကို ကွေ့ဝိုက်စီးဆင်းတာဖြစ်ပြီး ရေစီးလျော့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မြစ်ရေထဲ မျောလာတဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေက မြစ်ကမ်းပေါ်ကို သောင်တင်လာတာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့်လည်း အဲဒီနေရာမှာ လူသေအလောင်းတွေ အများကြီးဖြစ်နေတာ။” လို့ သူက ပြောခဲ့တာပါ။
ရုပ်အလောင်းတချို့ဆိုရင် အဲဒီမှာ သောင်တင်နေတာ ၂ ရက်ကနေ ၄ ရက်လောက် ရှိနေပါပြီ။ အိန္ဒိယရဲ့ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံး Uttar Pradesh ပြည်နယ်တွင်းက ဂင်္ဂါမြစ်ကမ်းတလျှောက်မှာ ရုပ်အလောင်းတွေ မြစ်ထဲမစွန့်ပစ်ရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ကင်းလှည့် စောင့်ကြည့်နေရပါတယ်။
အိန္ဒိယရဲ့ သန်းပေါင်းများစွာသော ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ ဘာသာရေးအရ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဂင်္ဂါမြစ်အတွင်း မျောလာတဲ့ ရုပ်အလောင်းတွေကိုလည်း ရှာဖွေနေကြောင်း ရဲအရာရှိ B.N. UPADHYAY က ပြောပါတယ်။
“မြစ်ကြောင်းတလျှောက် ကင်းလှည့်ရင်း သေဆုံးသူ ရုပ်အလောင်းတွေကိုလည်း ရှာပါတယ်။ တကယ်လို့ ရုပ်အလောင်းတွေ တွေ့ရင်လည်း ဓလေ့ထုံးတမ်းနဲ့အညီ မီးသင်္ဂြိုဟ်ပါတယ်။” လို့ ရဲအရာရှိက ထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း COVID-19 ဖြစ်ပွားသူ အသစ် ၃၂၆,၀၉၈ ဦးရှိပြီး သေဆုံးသူ ၃,၈၉၀ ဦးရှိကြောင်း အိန္ဒိယ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက စနေနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ COVID-19 ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း အနည်းငယ်ကျဆင်းကြောင်း ကျန်းမာရေး တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောဆိုထားပေမယ့်လည်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုက နိုင်ငံလူဦးရေ သုံးပုံနှစ်ပုံ နေထိုင်ရာ ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျံ့နှံ့ ကူးစက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန်ဒိယ ဂင်ျဂါမွဈတှငျး အလောငျးတှေ ထပျမံတှရှေိ့
အိန်ဒိယနိုငျငံ Uttar Pradesh ပွညျနယျတှငျးက ဂင်ျဂါမွဈအတှငျးမှာ စနနေကေ့ သဆေုံးသူ ရုပျအလောငျးတှေ ထပျပွီး တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတှအေတှငျး သဆေုံးသူ ရုပျအလောငျး ၁၀၀ ကြျော မြောပါလာတဲ့ နရောမှာပဲ အခုရုပျအလောငျးတှေ ထပျတှရေ့တာကွောငျ့ Ghazipur ခရိုငျ Gahmar ရှာက လူတှေ ထိတျလနျ့ ကွောကျရှံ့နကွေပါတယျ။ တခွားဒသေတှကေနေ မြောပါလာတာ ဖွဈနိုငျကွောငျး ရှာခံ Akhand Pratap က ပွောပါတယျ။
“တခွားခရိုငျတှကေနေ မြောလာတာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဂင်ျဂါမွဈက Ghamar ရှာကို ကှဝေို့ကျစီးဆငျးတာဖွဈပွီး ရစေီးလြော့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး မွဈရထေဲ မြောလာတဲ့ ရုပျအလောငျးတှကေ မွဈကမျးပျေါကို သောငျတငျလာတာ ဖွဈနိုငျကွောငျး၊ ဒါကွောငျ့လညျး အဲဒီနရောမှာ လူသအေလောငျးတှေ အမြားကွီးဖွဈနတော။” လို့ သူက ပွောခဲ့တာပါ။
ရုပျအလောငျးတခြို့ဆိုရငျ အဲဒီမှာ သောငျတငျနတော ၂ ရကျကနေ ၄ ရကျလောကျ ရှိနပေါပွီ။ အိန်ဒိယရဲ့ လူဦးရအေထူထပျဆုံး Uttar Pradesh ပွညျနယျတှငျးက ဂင်ျဂါမွဈကမျးတလြှောကျမှာ ရုပျအလောငျးတှေ မွဈထဲမစှနျ့ပဈရေးအတှကျ ရဲတပျဖှဲ့က ကငျးလှညျ့ စောငျ့ကွညျ့နရေပါတယျ။
အိန်ဒိယရဲ့ သနျးပေါငျးမြားစှာသော ဟိန်ဒူဘာသာဝငျတှရေဲ့ ဘာသာရေးအရ အထှတျအမွတျထားရာ ဂင်ျဂါမွဈအတှငျး မြောလာတဲ့ ရုပျအလောငျးတှကေိုလညျး ရှာဖှနေကွေောငျး ရဲအရာရှိ B.N. UPADHYAY က ပွောပါတယျ။
“မွဈကွောငျးတလြှောကျ ကငျးလှညျ့ရငျး သဆေုံးသူ ရုပျအလောငျးတှကေိုလညျး ရှာပါတယျ။ တကယျလို့ ရုပျအလောငျးတှေ တှရေ့ငျလညျး ဓလထေုံ့းတမျးနဲ့အညီ မီးသင်ျဂွိုဟျပါတယျ။” လို့ ရဲအရာရှိက ထပျလောငျးပွောဆိုခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတှငျး COVID-19 ဖွဈပှားသူ အသဈ ၃၂၆,၀၉၈ ဦးရှိပွီး သဆေုံးသူ ၃,၈၉၀ ဦးရှိကွောငျး အိန်ဒိယ ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနက စနနေမှေ့ာ ထုတျပွနျပါတယျ။ COVID-19 ဖွဈပှားမှုနှုနျး အနညျးငယျကဆြငျးကွောငျး ကနျြးမာရေး တာဝနျရှိသူတှကေ ပွောဆိုထားပမေယျ့လညျး ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျမှုက နိုငျငံလူဦးရေ သုံးပုံနှဈပုံ နထေိုငျရာ ကြေးလကျဒသေတှမှော ဆိုးဆိုးရှားရှား ပြံ့နှံ့ ကူးစကျနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။